ISikhokelo saBazali | Western Cape Education Department
Activities to reinforce elementary maths skills
"Masiphucule imfundo sibambisene. Ingaba umntwana wakho ukhe wafunda, wabhala waza wabala imaths namhlanje?"
Umyalezo ovela kwiSebe leMfundo leNtshona Koloni
ISebe iWCED liyakwamkela wena nomntwana wakho kwiBakala 1.
IBakala 1 ngunyaka obaluleke gqitha. Ukuba umntwana wakho uyazonwabela iintsuku zakhe zokuqala ezimbalwa esikolweni, uya kufunda ngokulula, azithembe ngakumbi, yaye akhe isiseko esiluqilima sobomi bakhe bokufunda.
Le ncwadana inika iingcebiso ngezinto onokuzenza ukunika inkxaso umntwana wakho kunyaka wakhe wokuqala esikolweni.
Ikharityhulam yeBakala 1 inezifundo ezithathu: uLwimi, iMathematika neZakhono zoBomi.
Le ncwadana inika inkcazo emfutshane ngesilabhasi yoLwimi neMathematika. Sinika iingcebiso ngokuba ungamnceda njani na umntwana wakho kwezi zifundo. Kumaphepha okugqibela ale ncwadana uya kufumana iilinki (links) ezikusa kumaxwebhu apheleleyo ekharityhulam akwikhompyutha kwiziko lewebhu lethu, neelinki zezinye izibonelelo eziprintiweyo nezizividiyo kwakunye nezikumajelo eendaba eziya kukunika ingcaciso ngokwenzeka kwiSebe iWCED.
Ndimnqwenelela umntwana wakho unyaka wolonwabo aya kuthi ngawo afunde ngempumelelo ukufunda, ukubhala nokwenza izibalo.
Iindlela zokunceda umntwana wakho ukuze aphumelele kwiBakala 1
Qinisekisa ukuba umntwana wakho uyakwazi amakakulindele
Wonke umntu ufuna ukwazi ukuba alindele ntoni na xa eqala into entsha. Thetha nomntwana wakho uqonde ukuba ulindele ntoni na nokuba yintoni na emkhathazayo okanye emxhalabisayo. Yiphendule imibuzo yakhe uze umcacisele ukuba isikolo yindawo apho aya kudibana khona nabantu abatsha, afumane abahlobo abaninzi aze afunde ukufunda, ukubhala nokubala.
Mxelele ukuba uya kumncedisa afunde ukufunda nokubhala kwiBakala 1 nokuba uya kumncedisa afunde amagama amatsha amaninzi. Mcacisele ukuba kufuneka amamele ngenyameko eklasini kwaye enze umsebenzi awunikiweyo ngeyona ndlela ibhetele. Mcebise ngelithi ukufunda kwenza umdla yaye kuzisa ulonwabo.
Mcacisele ukuba ezona zinto zimbini zibaluleke gqitha ekufuneka azenze kukufunda ukufunda nokwenza izibalo nokuba ezi zakhono zibalulekile gqitha kuba zimngenisa kwilizwe lemfundo.
Kukwafuneka nabo abazali bazilungiselele
Ukwenzela ukuncedisa umntwana wakho, tshekisha ukuba ngethuba egqiba iBakala 1, uya kuba efunde ntoni na kuLwimi nakwiMathematika.
Inkcazo emfutshane ngesilabhasi yoLwimi
Izinto umntwana wakho amakazazi yaye azenze ngethuba egqiba iBakala
Ukumamela nokuthetha: KwiBakala 1, umntwana wakho uya kufunda ukumamela ngenyameko nokubuza imibuzo. Uya kufunda kwakhona i-alfabhethi nokuba akhiwa ekwabizwa njani amagama. Uya kuwonwabela amabali utitshala wakhe amfundela wona.
Ukufunda: Ukwazi ukufunda kuya kuvulela umntwana wakho amathuba kwilizwa lokwenene nangaphezulu kwilizwe lengqikelelo. Ekupheleni kweBakala 1 kufanele ukuba abe sele efundile ukuqaphela nokubiza bonke oonobumba be-alfabhethi, kunye namagama alula nezivakalisi.
Ukubhala: KwiBakala 1 umntwana wakho uya kufunda ukusebenzisa ipensile, ibrashi yokuzoba neekhrayoni. Ekupheleni kweBakala 1 uya kuba nako ukubhala bonke oonobumba be-alfabhethi, kunye namagama alula, izivakalisi namabali.
Izinto onokuzenza ukuncedisa umntwana wakho aphuhlise izakhono zolwimi
Nazi ezinye iingcebiso zokuncedisa umntwana wakho
Yiba nexesha olibekela bucala lokuthetha naye ngesikolo.
Mkhuthaze akujonge xa uthetha naye ukwenzela ukumnceda akwazi ukumilisela ingqondo yakhe koko kuthethwayo.
Mgcine umntwana wakho enomdla efuna ukuqonda izinto ngokuthi uphendule imibuzo ngokuzeleyo.
Khulisa uthando lwakhe lokufunda ngokuya qho elayibrari yaye uncedise ngokumkhethela umntwana wakho iincwadi aya kuzonwabela.
Mfundele umntwana wakho ibali qho ebusuku phambi kokuba alale.
Khulisa uthando lwakhe lokubalisa amabali. Mbalisele amabali osapho uze umkhuthaze ukuba abalise amabali ngamava akhe. Buza imibuzo ngamabali lawo.
Mbuze imibuzo. Mbuze ukuba uziva njani kwaye ecinga ntoni.
Mnike iincwadi njengezipho.
Menze umntwana wakho azi nge-alfabhethi. ("Ingaba lo ngu-'b' okanye u-'d'?").
Mncedise umntwana wakho afunde amagama. ("Lithini igama elikule lebhile?").
Yandisa isigama somntwana wakho ngamagama ama-5 ukuya kwali-10 yonke imihla
Inkcazo emfutshane ngesilabhasi yeMathematika
Izinto umntwana wakho amakazazi yaye azenze ngethuba egqiba iBakala 1
Amanani: Ukwazi ukusebenza ngamanani komntwana wakho kuya kumnceda ukuba enze unxibelelwano oluqhelekileyo nehlabathi langaphandle. KwiBakala 1 umntwana wakho uya kufunda indlela yokuqaphela, ukuchaza, ukurekhoda, ukuthelekisa nokulandelelanisa izinto, kwakunye nokusombulula iingxaki zezibalo zamagama ngokunika iimpendulo ukuya kutsho kuma-20.
Iipateni: Iipateni zifumaneka kuzo zonke iindawo: Ukubetha kwentliziyo yakho, ukuphefumla, emculweni koonokrwece baselwandle (seashells), kwiindunduma zentlabathi nakumaza abetheka ematyeni. Amanani nawo enza iipateni, njengaku-2, 4, 6, 8, 10,…. Umntwana wakho makakwazi ukuqaphela, ukuchaza nokukopa iipateni, apho kunokwenzeka oku. Uza kuphinde asebenze ngeemilo (shapes) ukwenza iipateni zakhe.
Indawo nemilo: Umntwana wakho uya kufunda ngeemilo ezimacala mathathu (three-dimensional objects) (izazinge, iibhola, iibhokisi, iiprizim) neemilo ezimacala mabini (two-dimensional shapes) (izangqa, oonxantathu nezikwere). Okubalulekileyo kwakhona bubudlelane phakathi kwezinto ("Ingaba unxantathu ungasentla okanye ungasezantsii kwesangqa?").
Umlinganiselo: Umntwana wakho uya kusebenzisa iiyunithi ezingaqingqwanga zomlinganiselo ukubala ubunzima bento (umz. isikali sobunzima), ubude (umz. umtya, izandla ezivuliweyo (hand spans) nomthamo (umz. iibhotile, izikhongozeli). Uya kusebenzisa amagama anjengala: '-ninzi', '-ncinane', 'akukho nto' okanye 'izele' ukuchaza oko akuqaphelayo.
Ixesha: Umntwana wakho uya kufunda ukwahlula phakathi kwamaxesha emini (kusasa, ngokuhlwa) nokusebenzisa ikhalenda ukubala iintsuku zeveki neenyanga zonyaka.
Kucelwa uthethe notitshala womntwana wakho malunga nokuba zikhuliswa njani izakhono zokufunda, zokubhala neze-maths ekhaya. Ngokunika inkxaso isikolo sakho, kuninzi ongakwenza ukuqinisekisa ukuba isikolo sakho siyindawo emyoli ekufundwayo nekufundiswayo kuyo.
Izinto onokuzenza ukuncedisa umntwana wakho kwimathematika
Ukuba umntwana wakho angafunda ukuyonwabela angayoyiki imathematika, uya kungena ngokulula kwiintlaninge yeepatheni, iinombolo neemilo ezikhoyo. Ngako oko ke cinga imaths uthethe imaths nomntwana wakho:
Ukuba iphephandaba libiza i-R15 ngoMgqibelo lize libize i-R5 ngoMvulo, ingaba songeza malini ukuhlawula ngoMgqibelo?
Yeyiphi i-emele enamanzi amaninzi?
Kufuneka kudlule ixesha elingakanani phambi kokuba sisikhuphe isonka e-ontini?
Masilenze libe yeyiphi imilo eli qebengwana?
Xa uthenga, yitsho indlela izinto ezibekwe ngayo ezishelfini, ezahluke ngayo ngemilo nangexabiso.
Dlala imidlalo yanani kunye nomntwana wakho (umz. Iidomino, u-snakes and ladders).
Ukongeza kumhla, kwiiveki nakwiinyanga, sebenzisa ikhalenda ukubala nakwiipateni zamanani.
Ungancedisa kwakhona umntwana wakho notitshala wakho ngokuthi
uqinisekise ukuba umntwana wakho ufika ngexesha esikolweni.
uqinisekise ukuba umntwana wakho uyazifumana iincwadi zemisebenzi kunye nazo naziphi na ezinye iincwadi ezifanelekileyo kwakwiveki yokuqala yesikolo.
utshekishe ukuba umntwana wakho ufundile, wabhala waza wabala imaths yonke imihla.
uqinisekise ukuba umntwana wakho wenza imithambo eyaneleyo kwaye ulala ngokwaneleyo.
utshekishe qho iincwadi zomsebenzi zomntwana wakho.
ukhuthaze ukubaluleka komsebenzi wesikolo wasekhaya; kodwa mawungagqithi kwimizuzu elishumi ngosuku kwiikota ezimbini zokuqala kwiBakala 1 yaye ungabi ngaphezu kwemizuzu eyi-15 kwikota 3 neyesi-4.
uxoxe ngenkqubela yomntwana wakho kunye notitshala. Isikolo sakho kufuneka sikunike isicwangciso sovavanyo ekuqaleni konyaka neripoti yokuba uqhuba njani umntwana wakho (formal progress report) ekupheleni kwekota nganye; kwaye
uqinisekise ukuba umntwana wakho uhamba isikolo yonke imihla kwiintsuku eziyi-200 zonyaka wesikolo.
IZibonelelo zoLwazi lokuFunda nokuBhala nolokuBala
Iziko lewebhu i-WCED Online
Idilesi yeziko lewebhu: https://wcedonline.westerncape.gov.za
Iziko lethu lewebhu lihlaziywa yonke imihla kwaye linale ngcaciso ilandelayo: find-a-school facility, curriculum information, education news, frequently asked questions nezinye izinto ezininzi.
Kukwakho neli khasi libalaseleyo elineeNgcebiso ezinikwa aBazali (Tips for Parents)
AmaBakala R - 6: Ungaziphucula njani izakhono zokufunda, zokubhala nokubala imaths zomntwana wakho ekhaya
IBakala 3: Ungaziphucula njani izakhono zokufunda, zokubhala nezolwimi zomntwana wakho ekhaya
Bakala 3: IBakala 3 Ungaziphucula njani izakhono zemaths zomntwana wakho ekhaya
Isikhokelo sokufundela ukuzonwabisa nokuphumza ingqondo ngeholide
Iilinki ezinokukhethwa ze-games ne-activities kwi-Intanethi ("online") ukunceda ukubethelela izakhono zolwazi lokufunda nokubhala nolwazi lokubala ebantwaneni bakho
I-WCEDnews on YouTube
Idilesi yewebhu: http://www.youtube.com/wcednews
Tshekisha oku kulandelayo TeacherTips YouTube videos:
Funda ingcaciso ethi Getting every child in your class reading eluluhlu lweziqwengana ezisixhenxe ezifutshane zeevidiyo kwi-YouTube eziya kwenza uqonde indlela utitshala onobuchule akhuthaza ngayo ukufunda eklasini yakhe kunye neembono ngezinto emazenziwe ekhaya.
I-The MST Project (MST imele uMaths, Science and Technology), enezi zihloko zilandelayo ezibaluleke ngokukodwa: Shapes and relationships, More shapes and relationships, Numbers, Volume and Size, Shape and perspective, Giving and following instructions, Area, Solids, Building confidence, Temperature.
Eli jelo kwakhona libonisa ootitshala neenqununu eziphumelele amabhaso okuwongwa zaseNtshona. Bukela iividiyo ukujonga ukuba kuthetha ukuthini na ukufundisa nobunkokeli besikolo obukumgangatho ophezulu.
Iincwadi ekucetyiswa ukuba zifundwe
Kufuneka abantwana bafunde ngexesha leholide nangexesha lolonwabo ukuziqhelisa nokukhulisa ukuthanda ukufunda. Nantsi imizekelo yeencwadi ezonwabisayo zabantwana abakumaBakala R - 6 nezidla ngokufumaneka ngokulula kwiilayibrari nakwiivenkile ezithengisa iincwadi.
Ilisti yeeNcwadi zesiXhosa
ISigaba seSiseko (amaBakala R, 1 - 3):
T Chaane, P Qabazi: Zamkele
Trish Cooke: Kakhulu
Carl de Souza: UCitronelle
T Midiohovan, HD Sonon: U-Afi negubu lomlingo
J Dreyer: Uyavuma na Nkonjane?
E Browne: Isothuso sikaHanda
M Hadithi: Umntwana wemfene
W Baum: Kiboko
MacMillan: Amagama ali-100 okuqala
MacMillan: Izilwanyana ezili-100 zokuqala
Ndunge, B & Molefe, T: Usisa
Mvinjelwa,TA & Ndungane N: Izicengcelezo zamandulo zabantwana
Weber L: Masincedise ekhaya (Jasper Series)
Weber L: Ubumnandi epakin (Jasper Series)
Weber L: Ndim lo!:amalungu omzimba (Jasper Series)
Weber L: Bala kunye nam:amanani (Jasper Series)
Weber L: Ndingawenza umfanekiso (Jasper Series)
Gillham, B: Abantwana ababini
Molefe, T & Qabazi, P: Yintoni ingxaki
Leggat, G: Ukuthanda Imibala
Dreyer, J: UBanzi ebegula
Arrison, L: Ivili
Vanyaza, M: Umboleki
Randal, I: Siyanxiba
Bebey, K: Kutheni ndingekho emfanekisweni nje?
Cooke, T: Kakhulu
Dreyer, J: Utata uthenga imoto
Mennen, I: Ngobusuku obumnyama
Viljoen, G: Amaqanda
Bruna, D: Funda noMiffy
Leggat, G: Gom Gom Bhanana
Schermbruker, R: Egoli
Atkinson, H: Ibhola phezu kophahla
Dilley, B: Imibala
Walton, A: Usuku olumnandi
Manxiwa N: Isitiya sikamama
Tuntulwana, N: Uthando lukamama
Tuntulwana, N: Nokuba yintoni na kodwa iyingozi
Tuntulwana, N: UPixie
Tuntulwana, N: UNtondo
Tuntulwana, N: Kutheni incanda ihlaba ngeentsiba zayo
Ngcelwane et al: Vuya, Siya vuya
Ngcelwane et al: UVela noVelile
Diara, O: UNana nombungu
Dilley B & Davies D: Umnqwazi wam
Bruma, D: USnuffy nomlilo
Minya N: UVusumzi ngumongi
Poulton, P: Ubume bendawo yasedolophini
Howse-Chisale: Intlanzi ka-Orama
ISigaba seSiseko/kwiSigaba esiPhakathi
AmaBakala 1 - 4
Mari Grobler: Uhambo lukaMusa
Mari Grobler: Ingubo yeziziba KaLulama
Dux van der Walt: Ilokhwe ebomvu
Joan Rankin: UKatana noMpangele
Peta Coplans: Inja nekati
AmaBakala 1 - 5
G Leggat: Khawundiculele